Nekuda kwemazita akakurumbira akadai saSIRI naCortana, vazhinji vedu tajaira kuti zvinonzwa sei kufambidzana nemachina. Munguva ichangopfuura iyi yakaona kukwira kweChatbot kune mukurumbira wakakura. Chatbots ndeyakanyanya chikamu, magwaro anopindura mibvunzo otomatis.
0.1 Facebook Chatbot milik Torenz muenzaniso CNN.
0.2 Ndeipi chinangwa chako Chatbot chichave nacho?
1 1. Obrolan bahan bakar
2.1 Bagaimana akunoita
2.2 Ndezvipi zvimwe zvingaitwa neWengiChat?
2.4 Ona VakawandaChat muchiito
Facebook Chatbot milik Torenz muenzaniso CNN.
Paunotumira CNN paFacebook, unokwaziswa negwaro rinogamuchirwa rinokukoka iwe kuti ubvunze iyo Chatbot nezvezvinhu zviri kuitika. Paunongonyorera chimwe chinhu mukati, iyo Chatbot inoburitsa nhau dzine hukama nezvenyaya yakakumbirwa iyo yakatumirwa kuCNN.
Izvi zvinowedzera chidimbu chitsva mukukwanisa kweCNN panel yemagariro midhiya nzvimbo, maererano nekushandiswa, kusangana pamwe nekumhanya.
CNN Chatbot muchiito.
Panguva ino iwe uchave uchitotanga kufunga nezvemamiriyoni uye imwe mikana iyo inogona kuvhura iwe nebhizimisi rako. Kupindura nokukurumidza kune vatengi-hongu; Prosedur otomatis – periksa; iwe unogona kukwanisa kuwana Chatbot kuti ikubatsire kutengesa zvigadzirwa zvako – hero, YEAH!
Kami senang menggunakan Google untuk mengatur Google. Funga nezvekutanga:
Ndeipi chinangwa chako Chatbot chichave nacho?
Nharo dzemazuva ano dzakanyatsonaka uye dzinokwanisa kuita chero chipi zvacho. Ichokwadi, vamwe vakanaka kwazvo zvokuti vanogona kudzidza vari voga uye kuwedzerwa simba ravo pamhepo. Asi nehutano hukuru hunouya hukuru hwakaoma (tag uye kazhinji inotsika mutengo).
Ramba uchifunga mupfungwa inokosha yekuve neChatbot, uye iyo ndeyekuita sangano rekutsigira kune bhizinesi rako. IChatbot iripo kuti ibatsire vatengi venyu, vauye mukupa rubatsiro rwekukurumidzira, kunyanya kugadzirisa, kana kuburikidza nekuendesa mberi kwako.
Chikamu chakanakisisa chebasa iri rinotsigira ndechokuti rinonyanya kuwedzera bhizinesi rako. Iwe uchakwanisa kuva neChatbot ichipindura kune vatengi vatengi panguva imwechete yezuva.
Tichiisa iwe pfungwa iyo kwauri, rega isu timhanye kuburikidza dan mana saja yang dapat digunakan Chatbots nevanovapa. Masalah tichagovana newe rumwe ruzivo rwekutanga uye kuti ndeapi nharaunda chimwe nechimwe cheiyi Chatbots chinoshandiswa zvakanyanya mukati.
1. Obrolan bahan bakar
Ona Chatfuel muchiito
Halaman Facebook Hitidzira Tech Tech Crunch.
Situs web: manychat.com / Mutengo: Freemium
ManyChat inofanana chaizvo nezvakasikwa ku Chatfuel, kunyangwe mune tsanangudzo shomanana. Icho chinouya ne tutori chaiyo yakakura inokutungamirira iwe kuburikidza nekugadzira mharidzo yakagamuchirwa. Inowanikwa pachena asi inogadzirisa nhamba yemamwe mabasa kunze kwekuvandudzwa kune PRO PRO. Mitengo inotevera kuwedzera nhamba yevashandisi vanoshandisa iwe uri kutarisira kubata mwedzi, kutangira kubva kuU.S. $ 5 pamwedzi kwevashandi ve500.
Basa rekushandisa kwepamusoro pano rakafanana zvakafanana nedzimwe dzakafanana pane iyo inotenderera pane pre-setwa mharidzo iwe unopa. Izvi zvinobva zvataurwa kune vashandisi vako kutevera zvinotevera zvinotarirwa newe. Chinakan chakanaka apa ndechekuti kune maverengi ezvinyorwa zvemashoko uye mararamiro ekukutungamirirai pamwe chete.
VakawandaChat vane unhu hwakanaka uye hwakachena
Iinewo maitiro mashomanana akafanotaurwa asati asanangurwa iwe unogona kushandisa semutungamiri
Ndezvipi zvimwe zvingaitwa neWengiChat?
Pamusoro peMapeji Mashizha iyi inzvimbo iyo ManyChat ingangodaro inopenya. Sokusimbisa bhizinesi rekushandisa, ManyChat inopa kukura zvinhu zvingakubatsira iwe kuunza uye kutora zvinotungamirira.
Panzvimbo pokuvimba nemashoko ekugamuchirwa chete, iwe unogona kushandisa zvishandiso izvi kuti zvive pamwe chete nevashandisi vako uye unovapa ruzivo rwakakosha kupfuura kubva pakutanga. Chimwe nechimwe chekushandisa icho iwe unogadzira nekushandisa chinogonawo kutariswa pane imwechete kuti uone kuti vanoita sei.
Nokuda kwekugadzirira mberi, bhodhi inouyawo nemashoko ekugadzirisa. VakawandaChat vanotora danho imwe iri mberi nekukugonesa kuti utumire meseji zvinyorwa kubva kune dzimwe nzira dzinosanganisira YouTube ne Twitter.
Chimwe chezvinhu zvinofadza zveWengiChat ndiyo ‘Obrolan Langsung’ iyo inokuita kuti uone kunyatsoteerera kwevateereri vako nehutano hwakasiyana-siyana hwawakagadza. Inopawo mifananidzo yemifananidzo uye zvimwe zvimwe zvekuti Facebook inowanika.
VakawandaChat ndeimwezve yakakurumbira Chatbot iyo iri nyore kushandisa. Inokurumidza kugadzirisa nekubatanidza nePeji rako uye inopa ruzivo rwakanaka ruzivo kuitira kuti iwe ugone nyore kuwedzera bot yako.
VakawandaChat inoshanda pahutano hwaro hwese sangano seyero rokutanga rutsigiro. Kana iwe uchigona kuwana zvauri kutsvaga ipapo unodzokera kumashure ekugadzirwa kwekatekiti kwaunotumira iwe chikumbiro chako. Mhinduro dzinogona kutora kusvika kumazuva e3 uye kunyange zvakadaro, zvingatora nguva kuti dzigadzirise semashoko achienda mberi uye mberi.
Mikana yakanaka yekutungamira chizvarwa
Inoda pengkodean nol
Hapana chingave chekubatanidzwa kwezvitengesi
Haiti kutamba zvakanaka ne Chrome
Ona VakawandaChat muchiito
Hitidzira Halaman Facebook ManyChat.
Berkat nama-nama terkenal seperti SIRI dan Cortana, banyak dari kita menjadi terbiasa dengan rasanya